@Avid #NABShow | တွင် "AvidEverywhere" ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » @Avid #NABShow မှာ "AvidEverywhere" ကြေညာခဲ့ပါတယ်
@Avid #NABShow မှာ "AvidEverywhere" ကြေညာခဲ့ပါတယ်
များအတွက် Bellagio မီဒီယာ Event မှာ 1,100 နိုင်ငံများမှနီးပါး 43 ကလူ လွန်စွာလိုလားသော - ထို Ballroom မှတ်မိစက်မှုလုပ်ငန်းကလူနှင့်ပြည့်စုံသည် - နာမတော်များလွန်း! ငါအဟောင်းမိတ်ဆွေများကိုသို့အပြေးနှင့်အချို့သောလူသစ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြရတယ်! အဆိုပါကြေငြာချက်တစ်စက္ကအတွက်လာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ...
လူးဝစ်ဟာနန်ဒက်ဇ် Jr (LHJ) ရုံပြောကြားခဲ့သည်: လူတိုင်းဖို့ "ကြိုဆိုခြင်းနှင့်ကောင်းသောနံနက်။ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော Connect ကို, အများ၏အဖွင့်ဖြစ်ရပ် လွန်စွာလိုလားသော ဖောက်သည်အသင်းမှ။ "
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, လူးဝစ် ဟာနန်ဒက်ဇ်, Jr။ ကြီးကြပ် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ, ဖြေရှင်းချက်များ, န်ဆောင်မှု။ သူဟာနည်းပညာ, ဘောဂဗေဒ, မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုဆှေးနှေးသညျ့နရော Fox ကစီးပွားရေး, CNBC, ABC News သို့နှင့်ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကို TV ပေါ်မှာအထူးပြုလုပ်ထားသောဧည့်သည်, ဖြစ်တော်မူပြီ အပြင်သူနှစ်ဦးကိုစာအုပ်ရေးသားသူဖြစ်၏ ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအကျပ်အတည်းသည်ကမ္ဘာ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားပုံကို, မအောင်မြင်လွန်းအသေးစားနှင့် အမေရိကန်အိပ်မက်သိမ်းဆည်းနေ.
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၏ "တိုင်းရှုထောင့် - ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီတ downloads, ကနေစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုလျှက် - ငါတို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းလဲနေပါတယ် - ဒစ်ဂျစ်တယ်တည်းဖြတ်ရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူး , HD, 3D, 4K, 8K ။ "ဟာနန်ဒက်ဇ်ကဖော်ပြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူသည်တိမ်တိုက်အဖြစ်ကောင်းစွာ, မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကယ်တင်တတ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဒါပေမယ့် created ရဲ့ပုံကိုမသာလမ်းကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်လမ်းကိုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကို "ကြီးမားသောကစားသမား" ၏ပိုပိုပြီးမဟုတ်ဘဲ PC ကို-based အစီအစဉ်များအဖြစ်ထက်, အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးနေကြသည်။ အဆိုပါကြီးတွေရောင်း - သင်ကမကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ... ဒါဟာရှိသည်သို့မဟုတ်ယင်း၏ updates များကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ - သင်ကသုံးစွဲဖို့အင်တာနက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Trade-off ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်အချိန်မှာကအရေးပါသည်ဟု၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုချကထံသို့မရောက်ရ။ အဘယ်သူမျှမကပိုကို update များအတွက်ကွန်ပျူတာများကိုရရန်ပေးပို့ format နဲ့ပေါ်သို့ခံရမည်မီဒီယာများအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိခြင်း, အဆင့်မြှင့်လက်ငင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တော့ဘူးအသုံးပြုသူများ၏တာဝန်ပင်မဟုတ်! ဒါကအားလုံးပြီးနောက်, အနာဂတ် IS!
"ဖြန့်ဖြူးပိုမိုရှုပ်ထွေးဖူး, ဟာနန်ဒက်ဇ်ကဖော်ပြသည်။ "လိုင်းများအရေအတွက်, devices စျေးကွက်, Re-Purpose ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလူ့အခွင့်အရေးmanagementâ€" အဲဒါကိုဖြစ်ဖို့အသုံးပြုမကြိုက်ဘူးရဲ့။ ကြှနျုပျတို့လညျးဒီပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ "
စက်မှုလုပ်ငန်း Digitizing ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကိုအရေးအပါဆုံးအဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမယ့်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပျက်နှင့်ပွဲတစ်ပွဲပြုလုပ်အဖြစ်အနီးကပ်တတ်နိုင်သမျှတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပျက်ဖို့ရှိပါတယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ အခြားသူများကိုမကျင့်စဉ်အချို့မိုးတိမ်အတွက်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး - ကဖွင့်မယ့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုကိုင်တွယ်ရန်ထိရောက်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
"ငါသည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဒီတန်ဖိုးအသစ်ကွင်းဆက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်တစ်ခုတည်း, ဘုံ, ဘက်ပေါင်းစုံ platform ပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်ယောင်ကြည့်," ဟာနန်ဒက်ဇ်ကရှင်းပြသည်။ ၏ "ထိုအသီးအသီး လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဖောက်သည်ရှယ်ယာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒီဘုံပလက်ဖောင်း - လုံးပေါ်ကစတင်ခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော MediaCentral ပလက်ဖောင်း။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထူးခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးပေမယ့်ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုနိုင်သောအရာတို့ကိုအပေါ်အချိန်ဖြုန်းမ applications များရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့် applications များထက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြား။ ပလက်ဖောင်းထို့နောက်ဖန်တီးသောအကြောင်းအရာများကိုထံမှပစ္စည်း၏စားသုံးမှုမှအရာအားလုံးကိုပြု application များလိုက်လျောညီထွေပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါ လွန်စွာလိုလားသော MediaCentral ပလက်ဖောင်းဟာ suite ကိုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော applications များပါဝင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအစဉ်အဆက်သည်မိုဃ်းတိမ်သို့သွား - သာ tools တွေရှိပါတယ် - နှငျ့သငျနေဆဲသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုအဘို့ထိုသူတို့လေ့လာဆည်းပူးခြင်းအဟောင်းလမ်းရှိသည်။
အဆိုပါမီဒီယာ Suite အားလုံးလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ငွေရစေခြင်းမှတဆင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု spanning, တန်ဖိုးကွင်းဆက်၏တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်များအတွက်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် module တွေပါဝင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးစေရန်လိုအပ်သမျှ။ အဆိုပါသိုလှောင် Suite တစ်ခုခု Third-party သိုလှောင်မှုမှ connection ကိုခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ် လွန်စွာလိုလားသော သူတို့ကနေရာတစ်ခုတည်း၌ရှိကြ၏လျှင်အဖြစ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းနှင့်အတူတစ်နေရာတည်းတွင်သိုလှောင်မှု။
"Marketplaces ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟုဟာနန်ဒက်ဇ်ကဖော်ပြသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ် "ဟုအဆိုပါ platform ပေါ်တွင်အခြားမီဒီယာကုမ္ပဏီအသုံးပြုသောမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်အားလုံးအသုံးပြုနေသည်အတူတူပလက်ဖောင်းရဲ့အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှကိုလိုင်စင်, မှတ်သားခြင်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပုံစံချပေးသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးအတူတူပင်ပလက်ဖောင်းချွတ်အလုပ်လုပ်အတူတကွဒီအသိုင်းအဝိုင်းဆောင်ခဲ့၏တန်ခိုးပါပဲ။ တစ်ဦးအဖြစ်အတူတူလာမယ့်အားလုံးဖန်တီးမှုလူများ, အားလုံးဖြန့်ဖြူးဒြပ်စင်။ "
ဤ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်ကုန်အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်! ပိုငါကအတူဖြစ်ကြောင်းကိုပိုသဘောကျပါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ! သငျသညျကနေဒီကိုဖတ်ရှုနေတယ်ဆိုရင် NAB ပြရန် ကြမ်းပြင်ကိုသင်ဖို့အတွက်ကိုရပ်တန့်ရမည် လွန်စွာလိုလားသော ပြခန်း (S232LMR, S233LMR, SU902) နှင့်စစ်ဆေးထွက်သည်ဤအံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန် !!!
အဆိုပါထုတ်ကုန်တော်လှန်ရေးသမားပါ! ဒါဟာအံ့သြဖွယ် freaking ရဲ့ !!! ငါကအကြောင်းအလုံအလောက်မပြောနိုင်ပါဘူး! ကျွန်မအနေနဲ့ပိုပြီးရယ်ထင် လွန်စွာလိုလားသော ယခုအစဉ်အဆက်ထက်ပန်ကာ,
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 အသိပေးကြေငြာခြင်း လွန်စွာလိုလားသော နေရာတိုင်းမှာ avid Bellagio အကြောင်းအရာ တည်းဖြတ်ခြင်း အသားပေး လူးဝစ်ဟာနန်ဒက်ဇ်ဂျူနီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2014-04-05
ယခင်: ExciteM ကြေညာချက်များPartnershiâ€ <ps NBCU & Hearst နှင့်အတူရီးရဲလ်အချိန်Interactivâ€ <တီဗီProgramminâ€မှအီးစိတျအပိုငျး <ဂရမ် Add
နောက်တစ်ခု: NAB ပြရန်: Tightrope ကထပ်ပြောသည်တိမ်တိုက်လွှApplicatioâ€ <Cablecast မှ NS